Dilka Loogaystay Shaqaalaha WFP, Waxay Ceeb ku Tahay Dawlada Ethiopia – Rasaasa News
May 16, 2011 Dilka Loogaystay Shaqaalaha WFP, Waxay Ceeb ku Tahay Dawlada Ethiopia
Laba masuul oo ka mid ah, golaha wasiirada ee dawlada dhexe ee Ethiopia, ayaa saxaafada u sheegay in dilka shaqaalaha WFP, uu ka dambeeyo ururka ONLF. Arintaas oo ceeb ku ah dawlada dhexe, dawlada degaanka Somalida Itobiya iyo ururka ONLF, ee dawlada la heshiiyey.
Bishan May 13, waxaa lagu dilay degmada Goljano wiil darawal ah oo u shaqeeya WFP, midna waa la dhaawacay, labana waa la kaxaystay. Arintaas oo ay ka dambaysay argagixisada Maxamed Cumar Cismaan.
Dawlada dhexe ee Ethiopia iyo ururka ONLF, ayaa heshiis nabadeed ku saxiixay magaalada Addis Abab October 2010, waxaana xabsiyada laga sii daayey 402 maxbuus oo ka mid ahaa ciidanka ONLF.
Xiligaas waxaa lagu heshiiyey, wixii ka soo hadha ururka ONLF, ee dawlada nabada la saxiixay, waxay dawlada dhexe, dawlada degaanka Somalida iyo ururka ONLF-ba u aqoonsadeen in uu yahay Argagixiso.
Argagixsadaas waxaa loo aqoonsaday in uu madax u yahay Maxamed Cumar Cismaan, oo ay soo abaabusho xukuumada Eritrea, ninkaas iyo kooxdiisa oo cadaystay in marna ayna shacabka dhibaatada ka daynaynin.
Hadaba, waxaa la yaab leh, sidee ayey dawlada Ethiopia iyo Dawlada degaanku u odhan karaan dhibaatooyinka ka dhaca gabalka, waxaa ka dambeeya ONLF. Miyeyna arintaasi micno tiri karin heshiiskii ay dawladu la gashay ururka ONLF, kolba hadii ay saxaafada ka sheegayso in ay ONLF, tahay argagixiso dhibaatana ka wado degaanka?
Waxaa haboonaan lahayd in ay dawladu u magac bixiso argagixisada uu madaxda ka yahay Maxamed Cumar Cismaan, ee ay Eritrea wado. Laakiin aan la dhaawicin magaca ONLF iyo dadweynaha gude iyo dibadba taageeray nabada uu ururku qaatay.
Waa arin u taal dawlada Ethiopia, sidii ay dalalka reer galbeedka uga dhaadhicin lahayd in dhibaatada argagixiso ee ka jirta degaanka Somalida Ethiopia ay ka imanayso dalalka reer galbeedka.
Waa arin naxdin leh, in wiil Ingriis ah oo ka shaqaynaya mashruuc horumarineed, oo joojin lahaa kumanaan qaxooti ah, oo gali lahaa dalka Ingriiska in nin Qaxooti ku ah dalka Ingriisku uu ka shaqeeyo sidii loo dili.
Waxaa kale oo naxdin leh, in nin shacab oo maskiin ah oo u shaqeeya 5 caruur ah iyo hooyadood, kaalmaynayan kumanaan ruux oo ay abaari diiratay, in dilkiisa uu abaabulo nin qaxooti ku ah dalalka reer galbeedka.
Dadka abaabula dhibaatooyinkan, waxay degan yihiin dalalka reer galbeedka dadkuna waa wada ogg yahay, wixii lagu daayey waa iga su,aal?
Waxaa dhab ah, in Maxamed Cumar Cismaan iyo Kooxdiisa ay dalal badan oo reer galbeed ah u aqoonsadeen argagixiso, oo ay ka mid yihiin; Maraykanka, Scandanivian countries iyo dalka Ingriiska oo todobaad ka hore sheegay in dhibaatada kooxda Maxamed Cumar ay isha ku hayaan.
Waxaan hubaa in si dhakhso ah dad badan, oo la shaqeeya Maxamed Cumar Cismaan, oo aan si dhab ah ula socon arimaha socda, kuna nool dalalka reer galbeedka in ay soo gaadhi doonto dhibaato khusaysa mustaqbalka noloshooda.
Dagaal Cusub oo la Saadaalinayo in uu Dhex Maro Eritrea iyo Ethiopia